Soo dejisan Picasa 3.9.141.259 – Vessoft
Soo dejisan Picasa
Picasa – qabanqaabiyaha functional shirkad Google for leh photos iyo videos shaqeeya. Software la shaqeeyaa ugu qaabab loo jecel yahay iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xaalkaa, qabanqaabin, far iyo qori files si saxan. Picasa leeyahay tiro balaadhan oo ah alaabta iyo saamaynta for editing iyo hagaajinta of photos. Software The kuu ogolaanayaa inaad abaabuli albums, beddelid images si movies, bandhigyo ama soo duubey, iyo sidoo kale wadaagaan files by adeegyada loogu jecel yahay email iyo.
Fursadaha Wide leh images iyo videos shaqayn
Taageerada of qaabab popular
Go'an badan oo qalab iyo saamaynta for tifaftiri
Wadaagista files u dhexeeya users
Comments on Picasa:
Picasa Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... XnView 2.37 Standard, Extended iyo Minimal
Photo software The si aad u eegto iyo edit sanamyadii. software ka kooban yahay qalab ah ee geeddi-socodka Dufcaddii of images iyo Screenshot ah, abuuraa collages iyo GIF-animation.
Photo Software ee riixo Dufcaddii iyo diinta ee image files. Software ayaa awood u la qabsato oo tayo leh image, baaxadda iyo fursado kale oo lagu jiro diinta ee files.
العربية, English, Українська, Français... Inkscape 0.91
العربية, English, Українська, Français... HD Video Converter Factory 9.6 Pro iyo 9 Free
Converters Video fududahay in la isticmaali Converter of files video galay qaabab la taageeray by ugu aaladaha la qaadi karo iyo consoles'ka.
Saxannada Agabka in ay gurmad iyo kabsado xogta nidaamka. Software ayaa awood u tahay in la abuuro nuqul ka mid ah drive adag iyo si ay u gudbiyaan xogta ku saabsan side xogta kale.
English, Français, Español, Deutsch... Recuva 1.53.1087 Standard iyo Portable
Files utility The inuu ka soo kabsado faylasha tirtiray on your computer iyo sidayaal xog kala duwan. Sidoo kale waxaa jira shaqo ka mid ah dib u soo kabashada xogta ku saabsan drives burburay ama formatted ah.